Ny tsy fitovizantsika - SAINTYOL SPORTS CO., LTD.
Inona no mampiavaka ny ahitra SYSTURF!
Fanontaniana tsara ity, avelao izahay hamaly azy ho anao!
SAINTYOL SPORTS CO., LTD. (SYSTURF) Amin'izao fotoana izao dia manana patanty 55 izahay. Manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, fanamboarana ary fivarotana turf artifisialy. Ny orinasa dia manana tobim-pamokarana maoderina 60000 metatra toradroa, toby fanaovana sary tariby roa, toby famokarana iray vita amin'ny plastika sy fototra, fototra famokarana bozaka iray ary fototra famokarana fefy iray. Misy ekipa mpamorona matihanina miasa ao amin'ny biraon'i China manana traikefa 20 taona mahery, manome vokatra feno bozaka artifisialy, fanaingoana ary famolavolana sahaza fanatanjahan-tena.
Ireo no TOP 5 antony tsara indrindra ho anay
Fiantohana 8 ka hatramin'ny 15 taona amin'ny vokatra ahitra SYSTURF
Fitaovana ampiasain'ny BASF & DOW
Ny fitsaboana UV avo indrindra azo atao amin'ny toetrandro kontinanta samihafa
Fanamboarana manokana ho an'ny zavatra ilainao manokana
Fiaraha-miasa manokana azo antoka ho an'ny drafitry ny orinasanao
SYSTURF dia manolotra ahitra artifisialy mitady voajanahary indrindra azon'ny vola vidiana. Sariaka ny tontolo iainana, maharitra ary maharitra. Vokatra avo lenta misy fiantohana matanjaka, fitaovana fiarovana ary serivisy ho an'ny mpanjifa mba hamerenantsika ny sandantsika.
Ny fiaraha-miasa amin'ny SYSTURF dia hamonjy fotoana, vola, rano ary fitaovana hitazomana ny zaridainanao. Afaka mipetra-pialana sasatra sy miala sasatra fotsiny ianao, mankafy ny zaridaina tsara tarehy sy tsara foana hatrany!